Misintona fampiharana MP Kisan ho an'ny Android [Fanavaozana 2022 vaovao]
Te-hanao fanambaràn-tena momba ny taninao amin'ny fambolena Madhya Pradesh ve ianao? Raha eny, dia mila mahazo MP Kisan App amin'ny fitaovanao Android ianao. Izy io dia rindranasa Android, izay manolotra ny fiasa sy serivisy tsara indrindra ho an'ny tantsaha amin'ny MP mba hahazoany atiny misy fampahalalana sy fidirana mora amin'ny serivisy.
Ny fambolena dia iray amin'ny loharanom-bola lehibe any India, izay manana tany fambolena marobe. Ka ny governemanta dia te-hanome traikefa tsara kokoa ho an'ireo mpampiasa hiditra amin'ny serivisy. Noho izany, ity fampiharana ity dia novolavolain'ny tompon'andraikitra mba hanomezana tolotra tsara kokoa ho an'ny tantsaha.
Inona ny MP Kisan App?
MP Kisan App dia fampiharana ara-tsosialy Android, izay manome sehatra tsara indrindra ho an'ny tantsaha ao Madhya Pradesh mba hanao fanambarana ny tenany sy hidirana amin'ny endri-javatra hafa. Ny mpampiasa dia hanana dingana tsotra sy mora, tsy mitsidika birao na fandaniam-potoana ary miditra amin'ny endri-pambolena tsara indrindra.
Sarotra ho an'ny tantsaha any India ny manao fambolena mamokatra irery. Misy fahasahiranana samihafa, izay tsy maintsy iadiany mba hahatratrarana izay vokatra azo. Ka ny governemanta dia te-hanome vahaolana tsara kokoa ho an'ny vahoaka hampitomboana ny famokarana sy hahazoana fidiram-bola bebe kokoa.
Misy olana samihafa, izay mazàna mahazo tany amin'ny fomba ofisialy amin'ny sari-tany. Tokony hosoratan'ny olona ao anaty antontan-taratasin'ny governemanta ny taniny ary sarotra ho an'ireo mpampiasa izany. Noho izany, amin'ny fampiharana ity dia tsy mila miahiahy momba azy ianao. Azonao atao ny miditra amin'ny fomba mora amin'ny sasany amin'ireo fizotra sarotra amin'ny fampiharana ity.
Raha te hahazo ny nomeraonao Khasra na ny marika amin'ny sari-tany ianao dia azonao atao izany amin'ny MP Kisan Apk. Manolotra anao hamita mora foana ny fizotrany rehetra amin'ny fampiharana ity. Azonao atao ny mahazo ny laharan'ny Khasra amin'ny taninao ary ho hita eo amin'ny sari-tany misy ho an'ireo mpampiasa izany.
Ny fanjakana no hitari-dalana anao momba ny voly nafafinao, izay tokony hambolenao mba hahazoana tombony bebe kokoa amin'ny taninao. Noho izany, ny tompon'andraikitra dia hanome anao fanamarinana ny vokatra voafafy, izay ahafahanao manamboatra mora foana ny sahanao ary mahazo vola bebe kokoa amin'izany.
Misy ireo olona matihanina ao amin'ny departemanta ofisialy misy ny olona hitarika azy ireo amin'ny toe-javatra rehetra. Noho izany, raha manana olana amin'ny fambolena ianao dia afaka mifandray aminy mora foana miaraka amin'ity rindrambaiko ity ary mahazo torolàlana matihanina.
Hahazo torohevitra momba ny olana momba ny natiora ho avy amin'ny fambolena ihany koa ianao. Misy mpanolotsaina matihanina 24/7 hamaha ny olanao rehetra, toy ny E Gopala App. Azonao atao ny mamaha mora foana ny olanao rehetra ary manatsara ny fahaizanao mamboly.
Iray ihany ny olana, atrehanao amin'ity fampiharana ity. Mila mitandrina amin'ny fizotry ny fanambarana ny tena ianao. Rehefa vita ny dingana dia tsy afaka manova ny tany ianao. Misy dingana lava, izay tsy maintsy andalovanao amin'ny fanitsiana azy ireo.
Noho izany, mamporisika anao izahay tsy hanao hadisoana amin'ny fizotrany ary aza miala amin'ny olana lava. Misy endri-javatra mahavariana misy taonina hita ao amin'ny MP Kisan For Android, amin'ny alalanao no ahafahanao manatsara ny fahaizanao mamboly sy mahazo vokatra mahomby kokoa.
anarana MP Kisan
Anaran'ny fonosana in.gov.mapit.kisanapp
Developer MAP-IT, Dept an'ny siansa sy ny haitao Governemanta an'ny MP
Azo alaina ao amin'ny Google Play izy io, saingy tsy mila mandany fotoana amin'ny fitsidihana sehatra maro ianao. Izahay dia hizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity aminareo rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao eto amin'ity pejy ity ary manaova paompy eo amboniny. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Ilaina ny fisoratana anarana
Fanambarana tena momba ny tany
Makà Khasra voamarina
Torohevitra matihanina avy amin'ny governemanta
Ny fiteny Hindi ihany no tohano
Raha te-hahazo ny endri-javatra sy serivisy tsara indrindra ho an'ny tantsaha avy amin'i Madhya Pradesh ianao, dia alao ity fampiharana ity ary tadiavo izany rehetra izany. Ampidino ny fampiharana MP Kisan ho an'ny fitaovana Android anao ary tadiavo maimaim-poana ny serivisy rehetra misy amin'ity fampiharana ity.
Sokajy Apps, Social Tags MP Kisan Apk, MP Kisan App, MP Kisan App Download Post Fikarohana
MTG Arena Mobile Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Fampiharana Flash Fampitandremana ho an'ny Android [Fanavaozana 2022]